Isitya sokutya, iNdebe yeSauce, Ibhokisi yeziqhamo-XINLONG
Umda woPhuhliso lwezoQoqo kwiXinwu, kwiWuhu County, Anhui
Uluhlu lwebhokisi yesidlo sasemini
Iingxande zebhokisi yesidlo sasemini engunxantathu
Uluhlu lwebhokisi yesidlo sasemini emininzi
Uthotho lwebhokisi yasemini yaseMelika
Iingqungquthela zebhokisi yesidlo saseJapan
Uthotho lwebhokisi yesosi
Imela, ifolokhwe kunye namacephe
Wamkelekile kwi XINLONG
I-WUHU XINLONG IPLASTIC IMVELISO YEMVELISO., LTD
I-WuHu XinLong Plastic Products Co, Ltd. eyasekwa ngo-2020, yeyakwa-Wuhu WEITOL Automation Equipment Co., Ltd. Ifumaneka kwindawo ye-XinWu yoPhuhliso lwezoQoqosho kwisixeko sase-Wuhu, kwiPhondo lase-Anhui. Ibandakanya indawo engaphezulu kwe-8000 yeemitha zesikwere kwaye inabasebenzi abamalunga nama-50. It is a manufactory zeplastiki yobungcali. Sigxile kuphando kunye nokuveliswa kwe-PP izikhongozeli zokutya ezilahlwayo.
Sigxile kuphando kunye nokuveliswa kwe-PP izikhongozeli zokutya ezilahlwayo.
Gxila kwi-R & D kunye nemveliso yebhokisi yokutya okukhawulezayo, ibhokisi yokutya ekhawulezayo ekhawulezayo, ibhokisi yokutya ekhawulezayo ekhawulezileyo, i-tableware, i-tableware, i-tableware yokukhuselwa kwendalo, i-tableware iyonke, thabatha ibhokisi yokutya okukhawulezayo.
Ibandakanya indawo engaphezulu kwe-8000 yeemitha zesikwere kwaye inabasebenzi abamalunga nama-50. It is a manufactory zeplastiki yobungcali. Sigxile kuphando kunye nokuveliswa kwe-PP izikhongozeli zokutya ezilahlwayo.
Nabani na ocinga malunga nenkampani yethu kunye nentengiso, nceda unxibelelane nathi ngokusithumela ii-imeyile okanye unxibelelane nathi ngokukhawuleza. Njengendlela yokwazi ukuthengisa kwethu kunye nokuqina. okuninzi, unokuza kumzi-mveliso wethu ukuze ufumanise.
Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu ebomini. Kubandakanywa iibhokisi zokugcina ikhaya, izinto zasekhitshini, izinto zehotele, izinto zokudlela kunye nezinye izinto zokupakisha.
Ibhokisi yesidlo sangokuhlwa
Ibhokisi yesidlo sasemini yaseMelika 700ML
Ibhokisi yesidlo sasemuva esiyi-Rectangular 750ml
Ibhokisi yesidlo sasemini yaseMelika650ML
Imilo yebhokisi yesidlo sasemini yeOctagonal 1000ML
Isitya saseJapan sePlastiki sokutya seZitya ...
Umgangatho ophezulu Microwavable PP Plastic Container ...
Wuhu Xinlong Imveliso yePlastiki Co, Ltd.
Ngemizamo engagungqiyo, sineentlobo ezingaphezu kwe-260 zeebhokisi zeplastikhi, ibhokisi yeziqhamo zeplastiki, iimela zeplastiki, iifolokhwe kunye neepuni zeentlobo ezahlukeneyo kunye nokubalulwa.
Kuthi ulawulo lomgangatho sisenzo ngaphezu kwesilogeni.
Olunye uncedo lwetheyibhile esilahlayo xa kuthelekiswa ne-porcelain tableware eqhelekileyo kukuba kulula ukuyihambisa kwaye inokuphinda isetyenziswe kwakhona xa isetyenzisiwe. Ezilahlwayo ...
Impilo kunye nokukhuseleka: ibhokisi yesidlo sasemini elahlwayo yenziwe ngezinto ze-BPA zasimahla kwaye ayinalo ivumba elikhethekileyo xa lishushu. Ixesha elide kwaye linokuphinda lisetyenziswe: Reusabl ...
Zonke iivenkile zokutyela kunye neeresityu zokutya okukhawulezayo kwimarike zisebenzisa iikomityi zeplastiki ezilahlwayo, kuba ukusetyenziswa kweekomityi zeplastiki ezilahlwayo kulula kwaye kucocekile. Ndibhitye nje ...
Ngoluhlu olubanzi, umgangatho olungileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye noyilo olusebenzayo, iimveliso zethu zamkelwa ngokubanzi kwaye zithembekile ngabathengi bethu, kunye nokuthembeka. Umgangatho.